Thwebula Norton Security Deluxe 22.16.2.22 – Vessoft
WindowsUkuphephaUkuvikelwa okupheleleNorton Security Deluxe
Isigaba: Ukuvikelwa okuphelele
Ikhasi elisemthethweni: Norton Security Deluxe
I-Wikipedia: Norton Security Deluxe
I-Norton Security Deluxe – unqulo wesi arab olunzulu oluvela kwinkampani ye-Symantec eyakhele emkhakheni wokuphepha kolwazi nokuvikelwa kwedatha. Isofthiwe isebenza ukuvikelwa kwesistimu yezinga eliphezulu ngokusekelwe ku-algorithm yokufunda umshini, ukuhlaziywa kwedatha yokuziphatha, injini yokuvuselela i-antivirus entsha, nokuvikelwa okusebenzayo ngokumelene nokuxhaphazwa. I-Norton Security Deluxe iqukethe isithwebuli se-antivirus esibheka amafayela kukhompyutheni yakho futhi sibonisa umthelela kumithombo yesistimu kanye nezinga lobudumo lento ngayinye etholakalayo. I-firewall emibili evelele ngokugcwele ivikela ngokungena ngaphakathi futhi ivimbela abasebenzisi abanonya ukuba bathole ukufinyelela okungagunyaziwe kwedatha yomuntu siqu. I-Norton Security Deluxe ivikela i-imeyili kusuka okunamathiselwe okuthelelekile, futhi umphathi wephasiwedi eyakhelwe ngaphakathi ugcina ulwazi lomuntu siqu luphephile. Futhi, i-Norton Security Deluxe inezinombolo zemisebenzi eyengeziwe yokuthuthukisa ukusebenza kwekhompyutha, okungukuthi i-disk defragmenter, umphathi we-autorun nethuluzi lokuhlanza.
Ukuphepha kolwazi lwezezimali
Ihlola izinga lesethemba lamafayela
Amathuluzi wokusebenza wesistimu
Thwebula Norton Security Deluxe
Lokhu kuyisisusa sokususa zonke izinhlelo ze-Norton Security unqulo wesi arab efakwe kusistimu yakho, kufaka phakathi okubhalisiwe okufakiwe kanye namafayela asele.
Lesi yisixazululo se-antivirus esivela ku-Symantec inkampani, omunye wabaholi bezwe ekukhiqizeni isofthiwe ukuvikela amakhompyutha.
Amazwana ku Norton Security Deluxe
Norton Security Deluxe software ehlobene
I-AVG Internet Security – i-antivirus ethandwayo enobuchwepheshe besimanje bamafu ukuvikela ikhompyutha yakho kumagciwane ajwayelekile kakhulu, ama-scammers futhi ihlinzeka ngokuphepha kobumfihlo kwi-inthanethi.
I-AIM – ithuluzi lombhalo, izwi kanye nemiyalezo yevidiyo. Isoftware ikuvumela ukuthi wabelane ngamafayela futhi ungeze abasebenzisi koxhumana nabo kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Lena isofthiwe enhle kakhulu yabathengisi bomculo okuvumela ukuthi uhlele amalebhulali wezindaba bese uhlela imethadatha yamafayela alalelwayo.